Lacagta hawlgabka ee shaqo - KPA Pension
Lacagta hawlgabka ee shaqo
Lacagta hawlgabka ee shaqadu muhiim ayay kuu tahay
Shaqo-bixiyahaaga ayaa bixiya sannad kastaba lacag ku aadan kaydinta lacagta hawlgabka ee adiga loogu talogalay. Tani waa lacagtaada hawlgabka ee shaqada. Xilliga noloshaada xirfadda waxay noqon kartaa boqolaal kun oo karoon, waa qayb minco leh oo ka tirsan lacagtaada hawlgabka ee mustaqbalka.
Lacagtaada hawlgabka ee shaqo waxay u eekaan kartaa siyaabo kala duwan taaso oo ku xidhan qaybta aad ka shaqayso. Tani waxa sabab u ah in lacagaha hawlgabka ee shaqo ay ku yimaadeen heshiis u dhexeeya shaqo bixiyaasha iyo ururada shaqaalaha. Heshiiska lacagta hawlgabka waxa loogu talogalay adigoo ah shaqaale degmo ama maamul gobol waxana lagu magacaabaa AKAP-KL ama KAP-KL. AKAP-KL waxay khuseysaa qofka dhashay 1986 ama ka dib, haddii aad dhalatay ka hor 1986 waxa ku khuseysa KAP-KL. Heshiisyada waxa ku jira dhowr faa’iido kuwaas oo ammaan u ah adiga iyo qoyskaaga labadaba.
Qofkaaga ay khuseyso AKAP-KL waxad xaq u yeelan kartaa
Lacagta hawlgabka shaqada oo ku go’an faa’iido
Lacag hawlgab oo qoyskaaga ku aadan haddii aad dhimato
Qofkaaga ay khuseyso KAP-KL waxad xaq u yeelan kartaa
Lacagta hawlgabka da’da oo ku go’an manaafacaad
Xitaa waxad lahaan kartaa lacagta hawlgabka shaqada marka loo eego go’aamadi horre ee lacagta hawlgabka ama ka mid ahaan kartaa koox leh heshiis hawlgab oo gaar ah.
Lacagta hawlgabka shaqada oo ku go’an faaiido – ku dhammaan
Dhammaan shaqaalaha degmo iyo gobol waxay xaq u leeyihiin lacagta hawlgabka shaqada ee ku go’an faa’iido.
Haddii ay ku khuseyso AKAP-KL waxa uu shaqo-bixiyahaagu bixinayaa lacag u dhigmata boqolkiiba 4,5 ka mid ah mushaaradaada oo loogu talogalay lacagtaada hawlgabka shaqada. Haddii aad leedahay mushaaro ka sareysa boqolkiiba 7,5 ka sareysa cadadka dakhli ku salaysan markaa lacagtani waa boqolkiiba 30 ka mid ah mushaarada ka sareysa boqolkiiba 7,5 ee cadadka dakhli ku salaysan ilaa iyo 30 cadadka dakhli ku salaysan.
Haddii ay ku khuseyso KAP-KL waxa uu shaqo-bixiyahaagu laga bilaabo markaad buuxiso 21 sanno bixinayaa lacag u dhigmata boqolkiiba 4,5 ka mid ah musharaadaada oo ku aadan lacagtaada hawlgabka shaqada. Mushaarada ka sareysa 30 cadadka dakhli ku salaysan ma la bixiyo wax faa’iido ah.
Lacagta hawlgabka da’da ee ku go’an manaafacaad– loogu talogalay adiga oo ay ku khuseyso KAP-KL lehna mushaaro sareysa
Adiga leh mushaar sarre waxa jirta xitaa lacagta hawlgabka da’da ee ku go’an manaafacaad. Waxay kuu dammaanad qaadaysa lacag hawlgab oo u dhiganta boqolkiiba tiro go’an oo ka mid ah mushaaradi ugu dambeysa ee xilliga da’da hawlgabka. Lacagta hawlgabka da’da ee ku go’an munaafacaad waxad qaadashadeeda bilaabaysaa laga bilaabo da’da 28 sanno oo waxay khuseysaa qaybta mushaaradaada ee ka sarreysa 7,5 ee cadadka ku salaysan dakhli.
Lacagta hawlgabka KPA waa doorashada cayiman
Lacagta hawlgabka KPA waa waxa lagu magacaabo doorashada cayiman ee qaybtaadan ka mid ah lacagta hawlgabka shaqada. Tan micnaheedu waa in ururada shaqaalaha iyo shaqo-bixiyayaashuba ay ku heshiiyeen in lacagtaada hawlgabka ee shaqada la dhigo xagayaga oo la geliyo caymiska lacagta hawlgabka ee caadiga ah kaas oo leh ilaalinta dib u bixinta lacageed haddii aanad samayn doorasho kale. Waa doorasho kayd oo ammaan ah taas oo ku siinaysa lacag hawlgab oo la dammaanad qaaday. Xilliga la sugayo lacagta hawlgabka, waxa lacagtaada si ammaan ah loo dhigayaa waraaqaha saamiga dulsaarka ku xidhan iyo gudaha shirkado macquul ah oo faa’iido leh kuwaas oo buuxiyay shuruudahayaga ansaxa ee caawinaya mustaqbal raagaya.